२०७४–चुनाव – Page 217 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका सानातिना निम्न–पुँजीवादी रोगहरु
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको सक्रिय थालनीको लागि वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्दै गइरहेको प्रति हामी क्रान्तिकारीहरुले आवश्यक ध्यान दिन जरुरी छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विडम्बना भनौ या नियति, परिस्थितिको वहानामा कि त दक्षिणपन्थी बाटो अवलम्वन गर्दै संसदवादमा फसेर प्रतिकृयावादमा पतन हुने, कि त सानो झुण्डमा रमाउँदै समय परिस्थिति आएपछि क्रान्ति आफैं भइहाल्छ, गर्नु परेपनि सबै […]
चिकित्सकहरुकै लापरवाहीका कारण विरामीको दुवै मिर्गौला फेल
बाँके । भेरी अञ्चल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीले बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका–३ सोरहवाकी २२ वर्षीया रुमा थारूको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको छ । रक्तस्राव भएपछि उपचार गर्न आएकी उनलाई अर्कै समूहको रगत चढाइएपछि जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेकी छिन् । महिनावारी हुँदा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि परिवारले रुमालाई गत पुस २१ गते अस्पताल भर्ना गरेको थियो । ‘ओ’ पोजेटिभ […]
क्रान्तिकारी युवाहरु वैकल्पिक शक्तिको रुपमा अगाडि आउनु पर्छ : गजुरेल
इटहरी । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को युवा संगठन क्रान्तिकारी युवा लिग (आरवाइएल)को १ नं. प्रदेशको प्रथम भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले क्रान्तिकारी युवाहरु वैकल्पिक शक्तिको रुपमा अगाडि आउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर गरिएको […]
ज्ञान प्राप्ति भनेको के हो ? र कसरी हुन्छ ? मानिसको मस्तिष्कले वस्तुगत जगतको चित्र प्रतिबिम्बको रूपमा प्राप्त गर्दछ र त्यसको बारेमा अनुभवका आधारमा चिन्तन गर्दै अवधारणा तयार पार्दछ । मानिसले मस्तिष्कमा परेका अनेकांै प्रतिबिम्बहरूको तर्कपूर्ण, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, विश्लेषण र सश्लेषणको व्यवहारिक प्रयोग गर्दै, सत्यको नजिक पुग्ने निरन्तर प्रयत्न गर्दछ । सूचना सम्प्रेषण गर्ने इन्द्रीयहरू […]
क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघले तीन महिने अभियान चलाउने
काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघले तीन महिने संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान चलाउने भएको छ । माघ ३ गत्ते पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको महासंघको केन्द्रीय समितिको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले मजदुर आन्दोलनमा देखा पर्दै गएको गत्याबरोधलाई चिर्दै नयाँ आधारमा संगठन पुनर्गठन, सुदृढीकरण र विस्तार […]
प्रदेश प्रमुखको सपथ आज, आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर
काठमाडौं । देउवा सरकारले नियुक्त गरेका सात वटै प्रदेशका प्रमुखले आज राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदैछन् । शीतलनिवासमा अपरान्ह एक कार्यक्रमकाबीच प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सपथ लिनेछन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशको अस्थायी मुकामसंगै सातै प्रदेशका प्रमुख तोकेको थियो । सरकारले प्रदेश नम्बर १ मा डा.गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल […]
घुसखोरी र भ्रष्टाचारीलाई क्रान्तिकारी माओवादीले जनकारवाही गर्ने
बुटवल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(क्रान्तिकारी माओवादी)का नेताहरुले घुसखोरी र भ्रष्टचारीलाई जनकारवाही गर्ने बताउनु भएको छ । पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्यद्वय प्रेम सुवेदी र केबी गुरुङले जिल्लाका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो । क्रान्तिकारी माओवादी,रुपन्देहीको सचिवालयको विस्तारित भेलालाई सम्बोधन गदैं गुरुङ र सुवेदीले पार्टीले घोषणा गरेको तीन महिने अभियान सफल पार्न कार्यकर्तालाई […]